Apple Inoburitsa Yechipiri Beta yeMacOS 12.2 yeVagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS 12.2 yevagadziri
Vagadziri vekuvaka maapplication eApple vatove neshanduro nyowani yeMacOS Monterey yekuyedza. Ndezve iyo yechipiri beta ye macOS 12.2, iyo ichangobva kuburitsa kambani kune vese vanogadzira mapurogiramu vanoida.
Sezvinowanzoitika kune ese beta vhezheni yeMacOS, vane mvumo Apple Vagadziri vanogona kuidhawunirodha zvakananga kubva kuApple developer webhusaiti kana kuburikidza neOTA kana vatova nebeta vhezheni yeMacOS Monterey yakaiswa paMac yavo. , Tichafanira kumirira.
Masvondo matatu apfuura Apple yakaburitsa yekutanga beta yeMacOS 12.2 uye maawa mashoma apfuura yakaburitsa yechipiri beta. Iyi vhezheni ye macOS Monterey inosanganisira mutsva wemimhanzi application uye kuvandudzwa kweSafari pane ProMotion kuratidza, seMacBook Pro.
Beta idzva iri rine nhamba ye Vaka 21D5039d. Yave kuwanikwa pakurodha pa website kubva kuApple kune vanogadzira. Inogona zvakare kutorwa pasi kuburikidza neOTA, kana Mac yekuvandudza yakambove nebeta yeMacOS Monterey yakaiswa.
Yatova mune yekutanga beta ye macOS 12.2 dzimwe nhau dzinogona kucherechedzwa. Inosanganisira itsva yemuno application ye Apple Music, inokurumidza uye yakatsetseka kupfuura shanduro yapfuura, iyo yaitaridzika sepeji rewebhu.
Humwe hutsva hwataigona kuona mu macOS 12.2 beta 1 kuvandudzwa kwakakura mukupuruzira skrini muSafari ine zviratidziro. ProMotion, sezvakaita MacBook Pro.
Chinhu chine musoro ndechekuti iyi nyowani yechipiri beta ndeyekungogadzirisa zvikanganiso zvakawanikwa mune yekutanga, uye haipe chero yakakosha nhau kumushandisi.
Sezvatinogara tichiita kubva pano, tinokurudzira izvozvo usaise chero beta vhezheni macOS paMac yako, kana ukaishandisa kubasa kana kudzidza. Vagadziri vane Mac chaiwo ekuita aya bvunzo, ayo asina yakakosha data. Kana komputa ikaparara nekuda kwekukanganisa mu beta, vanoidzosera uye votanga patsva, hapana dambudziko. Ingozi dzebasa. Kana izvo zvikaitika kune wako, unenge uine dambudziko ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS 12.2 yevagadziri
Apple yakataurirana muna 2020 nemugadziri wezvikamu zvemota dzeJapan
13 × 16 Podcast: Zvatinotarisira kubva kuApple muna 2022